Ibsa wal quunnamtii Calc add-in LibreOffice gargaarsa keessaa argachuu dandeessa.Dabalataan, faankishinoonnni barbaachisoonii fi ulaagaaleen isaanii Shared Library LibreOffice Calc add-in DLL dhaaf.
LibreOffice Walquunnamtii add-in LibreOffice Calciif fakkeenyota qabata.
Faankishinoota Xiinxalaa Kutaa Tokkoffaa
Faankishinoota Xiinxalaa Kutaa Lammaffaa
Lakkoofsa guyyoota ji'a keessaa kan aduun gale itti argamu shallaga.
Aduun aduu kamiyyuu kan eerame ji'a keessaati. Ulaagaan aduu akka qindaa'inoota gitoo biyyaa LibreOfficetti aduu dhugaa ta'u qaba.
=DAYSINMONTH(A1) yoo A1'nin 1968-02-17 qabaate 29 kenna, aduu gataa'aa kan amajjii 1968ti.
Lakkoofsa guyyoota waggaa keessaa kan aduun gale itti argamu shallaga.
Aduun aduu kamiyyuu kan eerame keessaati. Ulaagaan aduu akka qindaa'inoota gitoo biyyaa LibreOfficetti aduu gataa'aa ta'u qaba.
=DAYSINYEAR(A1) yoo A1'nin 1968-02-29 qabaate guyyoota 366 qaba, aduu gataa'aa kan bara 1968.
Waggaan waggaa utaalu ta'uu isaa murteessa. Yoo eyyee ta'e, faankishinichi gatii 1(DHUGAA) kenna; yoo ta'uu baate, 0(SOBA) deebisa.
Yoo A1,guyyaa sirrii 29 amajjii 1968 qindaa'ina gitoo biyyaa keessaa 1968-02-29 qabaate=ISLEAPYEAR(A1) 1 deebisa.
=ISLEAPYEAR(2/29/68) gonkuma hin fayyadamiin, sababni isaas kun jalqaba 2 hiruu 29f hiruu 68f shallaguu qaba, sana booda faankishinii ISLEAPYEAR lakkoofsa xiqqoo kana irraa akka lakkoofsa guyyaa eenyummaatti shallagi.
Garaagarummaa ji'ootaa guyyoota lama gidduu jiru shallaga.
MONTHS(AduuJalqabaa; AduuDhumaa; Gosa)
AduunJalqabaa aduu duraati.
AduunDhumaa aduu lammaffaati
Gosni Gosa garaagarummaa shallaga. Gatiiwwan eeyyamaman 0 (giddu'uu) fi 1 (lakkaawwii ji'ootaan).
Arfiiwwan tartiiba qubee keessatti iddoowwan 13 tti hiiqsuudhaan diraa arfii icciteessa. Qubee Z booda, tartiibni qubee ammas (naanna'uu) jalqaba. Lakkaddaa uumamutti ammas faankishinii icciteessuu fayyadamuudhaan, icciitii barruu diiguu dandeessa.
Barruun diraa arfii icciteeffamuu qabudha. ROT13(ROT13(Barruun)) lakkaddaa saaxila.
garagarumma torbeewwan aduuwwan lama jiru kenna.
WEEKS(AduuJalqabaa; AduuXumuraa; Akaakuu)
Akaakuun akaakuu garaagarummaa shallaga. Gatiiwwan ta'uu danda'an 0 (giddu'u) fi 1 (lakkoofsa torbewwani keessatti) dha.
Lakkoofsa torbeewwan waggaa kan aduun gale itti argamu kenna. Lakkoofsi torbeewwanii akka armaan gadiiti hiikama:torbeen waggoota lama gargar baasu waggaa guyyotni torbee kana keessatti argamutti dabalama.
=WEEKSINYEAR(A1) yoo A1'nin 1970-02-17 qabaate 53 kenna, aduu gataa'aa kan bara 1970.
Garaagarummaa waggaa aduuwwan lama gidduu jiru shallaga.
YEARS(AduuJalqabaaStart; AduuDhumaa; Gosa)
Gosni gosa garaagarummaa shallaga. Gatiiwwan eeyyamaman 0 (giddu'uu) fi 1 (lakkaawwii waggootaa).
idaatuwaan LibreOffice API keessaan
Title is: Faankishinoota Add-in